Fursadaha Liverpool Ee Saxiia Erling Haaland Oo La Qiimeeyay —
Home » Fursadaha Liverpool Ee Saxiia Erling Haaland Oo La Qiimeeyay
Fursadaha Liverpool Ee Saxiia Erling Haaland Oo La Qiimeeyay
By radiosomit.com September 17, 2021 No Comments1 Min Read
Waxa shaaca laga qaaday in ayna Liverpool u dhaqaaqi doonin saxiixa xiddiga kooxda Borussia Dortmund Erling Haaland sabab la xidhiidha in ayna milkiilayaasha kooxdu bixin karin lacagta lagu helayo xiddiga.
Reds ayaan saxiixyo badan samayn suuqii xagaagii dhamaaday iyaga oo kaliya 36 milyan kula soo wareegay xiddiga Ibrahima Konate.
Dad badan ayaa filayay in ay xagaaga dambe Liverpool suuqa galin doonto lacag badan si ay u xoojiso kooxda waliba keeni doonto xiddigo ay ku buuxiso boosaska Salah, Mane iyo Keita kuwaas oo ka tagi doona kooxda bartamaha xilli ciyaareedka sabab la xidhiidha koobka Africa.
Xiddiga Erling Haaland ayaa ka mid ah xiddigaha lala xidhiidhinayo Liverpool laakiin madaxweynaha kooxda Bayern Munich ayaa sheegay in ayna Liverpool u dhaqaaqi doonin saxiixa xiddiga Haaland.
“Uma malaynayo in uu Haaland ku biiri doono Liverpool, sababta oo ah waxa aan garanayaa milkiilaha kooxda”ayuu yidhi.
“Ma ahan milkiilayaasah lacagta hura sidaas darteed ma filayo in uu Haaland ka ciyaaro Liverpool”ayuu sii raaciyay.